IIMPENDULO | Zigong City Xinhua Industrial Co., Ltd.
Imibuzo emihlanu ekufuneka uyazi ngaphambi kokukhetha ngokukhawuleza eyona mveliso ifanelekileyo
Ngaphambi kokuba ukhethe iimveliso ze-carbide enesamente, ukuba usixelela iimfuno zakho kwezi nkalo zintlanu, amagcisa ethu aya kuthi ngokukhawuleza akhuthaze ezona zinto zifanelekileyo kunye neemveliso zakho. Oku kuya konga kakhulu ixesha kunye neendleko. Kwangelo xesha, izixhobo ze-carbide zesamente kunye nezixhobo ziya kufezekisa owona msebenzi ulungileyo wokulungisa.
Umbuzo: Ngaba uqhubekeka ngesinyithi okanye ngokhuni? Yintoni izinto ezigqityiweyo?
A: Inkampani yethu ineentlobo ezingaphezu kwama-30 zamabakala e-carbide aqinisiweyo, kwaye ibakala ngalinye lineemeko ezifanelekileyo zokulungisa. Emva kokubamba into yokuqhubekeka, amagcisa ethu anokutshatisa ngokuchanekileyo eyona nto ifanelekileyo kuwe, Vumela imathiriyeli iphumelele ngokusebenza kakuhle.
Q: Ngaba ufuna ukuthenga izixhobo ze-tungsten carbide okanye izixhobo zokusika i-carbide?
A: Inkampani yethu yahlulwe yangamacandelo amabini emveliso ngokwefom yemveliso, izinto zesamente zekhabhayithi kunye nezixhobo zekhabhayithi ezinesamente. Iimveliso zezinto ezibonakalayo zibandakanya iintonga zekhabhayithi yesamente, iipleyiti zekhabhayithi yesamente, carbide yokubumba kunye nokufa kunye neendawo ezahlukeneyo zesamente.
Izixhobo ze-carbide ikakhulu zizixhobo zokusika i-carbide ezisetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo. Emva kokucacisa iimfuno, siya kuba neqela leengcali ukubonelela ngenkonzo yeeyure ezingama-24.
Q: Ngaba unazo iimfuno ezikhethekileyo eziphezulu zokulungiswa kokuchaneka kunye nobunewunewu beemveliso?
A: Ngokubanzi, siqhubekeka ngokungqinelana nokunyamezelana okumgangatho wamanye amazwe, okunokuhlangabezana neemfuno zabathengi abaninzi. Nangona kunjalo, ukuba uneemfuno ezizodwa zokunyamezelwa kwimilinganiselo yemveliso, nceda usazise kwangaphambili, kuba amaxabiso emveliso kunye nexesha lokuhanjiswa ziya kwahluka.
Q: Luluphi uphawu kunye nenqanaba lezinto ze-carbide ozisebenzisayo ngoku?
A: Ukuba unokubonelela ngohlobo lwekhabhayithi enesamente oyisebenzisayo ngoku, ulwazi malunga neepropathi zamachiza, iipropathi zomzimba, amagcisa ethu aya kukhawulezisa ngokuchanekileyo kunye nezinto ezifanelekileyo.
Q: Ukuzinza komgangatho kunye nexesha eliphambili
A: Inkampani yethu yinkampani ye-carbide eqinisiweyo evelisa izinto ze-tungsten carbide kwimveliso egqityiweyo ngumzi-mveliso wethu, ke lonke ikhonkco lemveliso lilawulwa sithi. Inkampani yethu isebenza ngokungqongqo ngokungqinelana nesiqinisekiso sekhwalithi ye-ISO2000, enokuqinisekisa uzinzo lomgangatho wemveliso nganye. Iimveliso ezisemgangathweni zinokuthunyelwa zingaphelanga iintsuku ezi-3, kwaye iimveliso ezizenzekelayo zingathunyelwa ngaphakathi kweentsuku ezingama-25.